Factory Tour - Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd.
SPOCKET dia iray amin'ireo ozinina manana laharana voalohany misy fotodrafitrasa avo lenta, teknolojia mandroso ary asa efa za-draharaha matihanina am-pinoana amin'ny tsena demorika sy ivelany. Izy io dia manodidina ny 2000 metatra toradroa faritra famokarana ho an'ny fampisehoana mijoro sy ny lanyard fiarovana amin'ny ankapobeny. Ny milina rehetra dia manana kalitao tsara, misy fenitra aondrana.
Manohana ny serivisy OEM / ODM izahay!
Manolotra ny mpanjifa tsirairay izahay miaraka amin'ny vokatra sy serivisy OEM sy ODM avo lenta avo lenta mba hahatratra ny takinao.
• Manolora Serivisy OEM
• Serivisy fanolorana tolotra
• Marika mpividy tolotra
• Manolotra fonosana ho an'ny mpividy
Manana ekipa R&D 4 izahay izay misy injeniera efa za-draharaha 10.
Ireto misy andiam-vokatra maro toy ny: POS / takelaka PC / finday fampisehoana finday, toeram-pisakafoanana manohitra ny halatra, fitaovana fampisehoana azo ovaina, boaty fisintonana anti-halatra, lanyard mihosin-plastika, lanyard tariby vy, lanyard tady fiarovana, hidin-tariby fiarovana, fanjairana fehikibo azo ovaina, roulant badge, marika vy, rindrambaiko tady.
Manana maodely marobe momba ny vokatra fiarovana izahay mba hanomezana fahafaham-po ny filàna samihafa. Ny sasany amin'ireo vokatra vokarinay dia nahazo fankasitrahana avo sy fiderana avy amin'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany taorian'ny nidirany tao amin'ny tsena.